Bitcoin yimali ye-intanethi – kunye a Bitcoin Card Credit, ungakwazi ukuhlawula naphi na emhlabeni apho Credit- okanye debit Amakhadi yamkelwe kunye Currency Crypto yokhetho lwakho. Bekunye Wallet Bitcoin, ungakwazi esikhundleni ngayo 95% zonke iinkonzo Bank eqhelekileyo unako kwakhona ukunika kuwe.
Kunye umahluko omkhulu ukuba une ukulawula inani phezu eseleyo imali yaye akukho. Oku ikamva yezimali. Nandipha inkululeko. Ukuba unemibuzo malunga ukuthenga Card Bitcoin, qinisekisa ukuba ubheke “Indlela ukukhetha” guide below.
Spectrocoin Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ Onke amazwe emhlabeni wonke ifakiwe
+ Zokusebenza ezikhoyo mobile abasebenzisi kakhulu Windows
+ ikhadi Company ekhoyo
– ngenqanawe olubizayo
– Ingxelo umkhonyovu nezikhalazo
– Missing ulwazi kwiwebhusayithi
engaziwa Card: Ewe
ikhadi plastic: Ewe
ikhadi virtual: Ewe
kwizimali: iUSD, i-eur, IGBP
Imali Transaction Foreign: 3%
Ilayisha Imali: free
Imali yenyanga: $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Cryptopay Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ kwizimali ezintathu ezinkulu (i-eur, IGBP, iUSD) zonke ogunyazisiweyo
+ Free kwihlabathi-ngokubanzi yokuthumela
+ Website yenzelwe kakuhle kwaye kulula ukuyisebenzisa
– Kuphela kubemi EU
– amaxabiso aphezulu
– intlawulo yokusebenzisa inkonzo Foreign
kwizimali: i-eur, IGBP, iUSD
Ilayisha Imali: 1%
Imali yenyanga: $1
WageCan Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ Iyafumaneka kumazwe amaninzi kuqukwa USA
+ Abaseki abanolwazi zobugcisa strong
+ Ifumaneka USD, i-eur, IGBP
+ inkqubo bonus
– Imali ikhadi olubizayo
– Ulwazi kunzima ukufumana kwi website
– Ikhadi ingabizi kuba kuphelile
engaziwa Card: Hayi
card Price: ukusuka 0.025 BTC
AdvCash Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ Akukho imali yesondlo ngenyanga
+ Hlikihla lwemali ekhoyo
+ top ezamahala evela USWIFT / SEPA ukhutshelo, rate flat ethunyelwayo
– Akukho zokusebenza ezikhoyo
– EU Countries kuphela inkxaso
– Akukho lwazi kwisakhiwo ubunini okanye abaphathi
– imida mihla iintengo kwabasebenzisi kwaye uqinisekise
card Price: plastic $/€ 4.99 (14.99 emva 7 iintsuku) – virtual 1 + 0.99 $/€ mali
kwizimali: i-eur, IGBP, iUSD, Hlikihla
Imali Transaction Foreign: 2.95%
Ilayisha Imali: $/€ 0.99 transaction ngalinye
Imali yenyanga: free
CoinsBank Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ Bonke-in-nye crypto kumnikezeli isipaji, exchange kunye nekhadi debit bitcoin
+ Iyodwa into eyindoda enkulu eyake kwizimali USD, i-eur, IGBP, ikhadi ifumaneka miri, CHF, AUD, zemali JPY kakhulu kwaye yenza litecoin akhawunti kakhulu
+ amathuba ikhadi abaninzi esekelwe kwinqanaba yokuqinisekisa
– ubunini Complex kwaye selubala kunye nezakhiwo eqinile
– ngenqanawe mahala ifumaneka kuphela kubasebenzisi premium
– Imirhumo High isicelo POS and ATM
card Price: plastic ukusuka $14.95 – virtual ukusuka $2.95
kwizimali: i-eur, IGBP, iUSD, Hlikihla, CHF, AUD
Imali Transaction Foreign: ukusuka 2.5%
Imali yenyanga: $0.95-$2.95
Uquid Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ Ifumaneka USD, i-eur, GBP no 40 altcoins ezahlukeneyo ngaphandle bitcoin
+ iintengo esaphila Unlimited kunye notsalo-ATM
+ ukulayisha ezininzi iinketho
– Poor IsiNgesi sisetyenziswa kwi website lwabo
– Akufumaneki kubahlali US
– inkampani fresh
kwizimali: iUSD, i-eur, GBP no 40 altcoins ezahlukeneyo
Ilayisha Imali: 1.5% – 5%
Xapo Bitcoin Card – Okuhle nokubi
+ inqanaba eliphezulu lokhuseleko
+ isakhiwo capital Strong
+ Akukho top up imirhumo
– umsebenzisi Ayingqinwanga Isiqingqo imicimbi intanethi kunye POS
– ngaphandle abemi US
ikhadi virtual: Hayi
Yintoni Bitcoin Card okuhle?
Indlela ukukhetha umboneleli Bitcoin Card ekunene?
Kukho iinkampani ezininzi kwaye uqale amahla ngokubonelela imali bitcoin mihla njengoko cryptocurrencies ngokuya kuthandwa ngakumbi.
Kukho ezinye iingongoma ukuba kufuneka debit wekhadi wanna-ukuba bitcoin ukujonga xa uphendla Provider. Ababoneleli khadi ukuxela uninzi le ngcaciso kwi sites zabo, ngoko yonke kuthatha nje ukuyifunda nge ngocoselelo. Fumana ulwazi ngemvelaphi lenkampani ikhadi sobunyani.
Ingcamango lonke emva bitcoin kunye ileja blockchain karhulumente yokungathembani. Ngoko bamakhadi debit bitcoin angabaxhamli ngokuqhelekileyo ibitheni ngaphezu abathengi kwamanye amashishini. Ngoko ke ababoneleli kufuneka bazenze iiklayenti zazo elizayo ukuba babonelela legit, iinkonzo ithembekile.
Ngokuqhelekileyo ababoneleli zinika iinkonzo kakhulu ngaphezu nje ikhadi. Wonke umntu isipaji, kodwa umzekelo Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo bonke ziqhube ukutshintshiselana zabo bitcoin ukwenza ukuthenga bitcoin ngqo nge kwiwebhusayithi yabo. Kungenjalo umsebenzisi ukuba ilifa cryptocurrencies phambi bewakhwelisa ukuya bitcoin ikhadi debit ehambisanayo.
AdvCash ikhadi bitcoin debit na iimali ezintathu eyake ezinkulu ezifana USD, EUR and GBP ukuthandwa bonke ababoneleli. Hlikihla yeyona lwemali kuphuma ixhaphakileyo, abasebenzisi Russian inokuyalela AdvCash bitcoin amakhadi debit apho akhawunti ngokweemali miri.
amakhadi zeplastiki kunye virtual kukhona emakethe. ingasetyenziswa amakhadi zeplastiki zombini notsalo ATM nezinto ezithengwa online, ingasetyenziswa amakhadi virtual kuphela online. It Kubalulekile ukuhlola phambi kokusayina phezulu ingaba umboneleli ikhupha amakhadi zeplastiki okanye kuphela ukhetho virtual luyafumaneka.
Xa umniki-debit card ezininzi bitcoin, abasebenzisi usebenzise iinkonzo ngaphandle ukuqinisekiswa ingubani, nangona kunye limites kwimeo. Le mida ziquka nsuku, imida ngenyanga Nobomi kwi etsalwe imali okanye ukuthenga POS. Kungenjalo inkqubo yokungqinisisa kwenziwa ngokuthi angenise ubungqina bokuzazisa xa uhlobo ikhadi ID wesizwe kunye nobungqina yokuhlala apho inokuba bill eluncedo evela elidlulileyo 3 iinyanga ezininzi kwezi meko. Ixesha ezifunekayo ukuze kuqinisekiswe ziyahluka lukhulu, ukusuka ezimbalwa iiyure ukuze nokuba 10 iintsuku.
Bitcoin debit Card, ukuba ukhethe?
Ngenxa imimiselo abasebenzisi umba imithetho eUnited States abafakwanga bona kule nkonzo, ngaphandle CoinsBank leyo inika iinkonzo US abemi.
Nokuthunyelwa kwamaxabiso ikhadi zeplastiki yakhiwe kwezinye iimali, ngoko ngokuqhelekileyo ngenqanawe oluqhelekileyo ukhululekile, amacala abanikezeli malunga 45-70 USD for zakhawuleziswa khetho ukunikezelwa.
Uninzi ababoneleli kufuneka apps smart ezifumanekayo ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi ukulawula izimali zabo kusuka smart. Ngokuqhelekileyo izicelo iOS and Android zibonelelwa, kodwa phone abasebenzisi Windows kusenokufuneka ukuba ukucinga eminye, njengoko ifumaneka kuphela Spectrocoin abathengi.
Ikhadi zentengo Iintlawulo Transaction
Imirhumo ekuqaleni umba khadi ukusuka 5 USD ku 20 USD nge isilinganiso 10 iUSD. Ezinye inikeza amakhadi virtual kuphela, kodwa iindleko kuphela 0.5 iUSD.
Kwezinye baboneleli ukuba ingasebenzi kunye nekhadi akohlwaywa kodwa abaninzi lokubiza imali eyongezelelweyo ngokuba engasebenziyo. abasebenzisi Engasebenziyo ngabo abangazenziyo kokwenza nakanye kwiminyaka emibini kunye nekhadi.
Izigulana kulayishwa ikhadi ngeentlawulo ngocingo okanye SEPA ibilutshintshiselwano imali emhlabeni 0.5%-1%. Abanye ababoneleli sisebenza amazinga flat, ngoko abaxhasi kufuneka sinikele ingqalelo inani kunye nesixa-mali idluliselwe kwi-akhawunti sipaji kwikhadi debit. Kukho ukhetho ukulayisha nokuwathula kunye nabaniki intlawulo enye ezifana Skrill, Neteller okanye PayPal. Amanye amakhadi bitcoin debit, Noko ke amaxabiso ingaphezulu transfers wire, ingayi 1% ukuba 5% ntengiselwano nganye.
Ababoneleli bitcoin debit khadi inzuzo xa umsebenzisi kokwenza kunye nekhadi. Nangona ukuthenga intanethi zidla free, kodwa ingaba afune intlawulo ngaloo kakhulu. ATM lusoloko icala kwelinye icala. Le notsalo cash zasekhaya ngeenxa 2-3 iUSD, i notsalo ezizwe ngezizwe 3-4 iUSD, kusenokwenzeka ukuba izinga caba kuyasetyenziswa ecaleni pesenti. Ukuba kuthengwe okanye ukurhoxiswa currency eyahlukileyo ngaphezu lwemali engagqibekanga ye-akhawunti bonke abanikezeli lokubiza extra izinga lotshintshiselwano lwemali 3%.
Client Impendulo Experience User
inkonzo Good uqala kwiphepha elungileyo indiza. Kufuneka ukuba kucace gca ukuba le nkonzo kunye nendlela kubiza malini. Abaxhasi sebenzisa website ukuze ufumane iinkcukacha ezifanelekileyo malunga ngeenkonzo ezinikiweyo. Ecaleni isakhiwo menu ecacileyo FAQ; ababoneleli kufuneka ibandakanye usebenziso search ngaphakathi kuyo. ukwaneliseka Customer kakhulu kuxhomekeka izixhaso ezibonelelwe bitcoin debit benkampani, ezifana nenkqubo ngamatikiti, Hotline ingxoxo Live.
Kukho amathuba amaninzi umboneleli ikhadi bitcoin inganikeza iiklayenti yayo. The best bitcoin debit card umboneleli kuxhomekeke ezithile iimfuno lomsebenzisi.